Shiinaha Soosaarka Dhar Elektiroonig ah iyo Warshad | Jiashun
Faybalka muraayadaha waa nooc ka mid ah maaddooyinka aan-dabiici ahayn ee aan-birta ahayn oo leh waxqabad aad u fiican. Waxay leedahay noocyo badan oo faa'iidooyin ah, sida kuleylka wanaagsan, iska caabbinta kuleylka ee xoogga leh, iska caabbinta daxalka wanaagsan iyo xoogga farsamada sare, laakiin cillad darrooyinkiisu waa kuwo jajaban oo iska caabin liita. Faybalka dhalada ah waxaa badanaa loo isticmaalaa inuu yahay qalab xoojinaya walxaha isku dhafan, qalabka dahaarka korantada iyo qalabka kuleylka kuleylka, guddiga wareegga iyo qeybaha kale ee dhaqaalaha qaranka.
Maro elektaroonig ah ayaa ah ereyga guud ee maaddada fiber opticga ah ee loo isticmaalo warshadaha elektarooniga ah. Waa maro elektaroonig ah oo ah fiber fiber galaas ah oo ku jira alaabooyinka heerka sare ah. Tilmaamaha ugu muhiimsan waa 7637, 7630, 7628, 7615, 1506, 2116, 2113, 3313, 1080, 106, 104, oo inta badan loo adeegsado soo saarista taarikada balastarka xidhan.
MAGAC 7637 7630 7628M 7628L 7615 7615H
DABKA ECG75 1/0 ECG67 1/0 ECG75 1/0 ECG75 1/0 ECG75 1/0 ECG75 1/0
GUDDOON ECG37 1/0 ECG67 1/0 ECG75 1/0 ECG75 1/0 ECG150 1/0 ECG1501 / 0
OOY (G / m2) 228 ± 5 220 ± 5 210 ± 5 198 ± 5 160 ± 4 178 ± 4
THIKNESS 0.210 ± 0.185 ± 0.02 0.180 ± 0.02 0.173 ± 0.012 0.135 ± 0.012 0.140 ± 0.012
MAGAC 1506 2116 2113 3313 1080 106
DABKA ECE110 1/0 ECE225 1/0 ECE225 1/0 ECDE300 1/0 ECD450 1/0 ECD900 1/0
GUDDOON ECE110 1/0 ECE225 1/0 ECD450 1/0 ECDE300 1/0 ECD450 1/0 ECD900 1/0
Oohin (g /) 164 ± 3 105 ± 3 78 ± 3 81.4 ± 2.5 47.5 ± 2.5 24.5 ± 2.5
Dhumucdiisuna 0.150 ± 0.012 0.100 ± 0.012 0.079 ± 0.012 0.084 ± 0.012 0.055 ± 0.012 0.033 ± 0.012
Mashiinka Fiberglass E-Glass waa miis yar oo tolmo wanaagsan leh oo la isku duubay oo badanaa loo isticmaalo warshadaha, badda, iyo codsiyada aerospace. Fiberglass E-galaas maro waxaa loo tixgeliyaa heerka warshadaha waxayna siisaa isku dheelitirnaan aad u wanaagsan qiimaha iyo waxqabadka. Waxay leedahay dabacsanaan aad u fiican waana ka nadiifsan tahay in lala shaqeeyo marka la barbardhigo gogosha gogosha maaddada fiberglass-ka, waana ka qaalisan tahay S-Glass clothdue si loo yareeyo awoodda dhinac dhinac ah. Maro adag oo dun leh ayaa lagu soo saaray halkan shirkadaha Shiinaha, si aan kuu siino badeecad isdaba-joog ah oo loo soo saaray heerarka ugu sarreeya ee aad ku kalsoon tahay.
J: Waxaan nahay soo saare xirfadle ah.
J: Had iyo jeer muunad horay-u-soo-saar ah ka hor inta aan la soo saarin tiro badan. Markasta kormeerka kama dambeysta ah ka hor rarka.
3. Miyaad ku soo saari kartaa sheyga si waafaqsan shuruudaha macaamiisha?
A: Sure, waxaan nahay soo saare xirfadle ah, OEM iyo ODM labadaba waa la soo dhaweynayaa.
4. Maxaad nooga iibsaneysaa alaab-qeybiyeyaasha kale?
J: Changzhou jiashun qalabka cusub ee Co., Ltd., oo la aasaasay sanadkii 2000, waa shirkad cilmiyaysan iyo tiknoolajiyad ku takhasustay hawlgalka noocyada kala duwan ee marada muraayadda dhalada ah, bustaha dabka iyo wixii la mid ah
Hore: Maro badan
Xiga: Dharka warshadaha